CCXP Cologne 2020: Cosplay kukwikwidza panzvimbo ye-on-saiti kuratidzwa - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jul 16, 2020 | CCXP Cologne, nhau, Events
CCXP Cologne yakamiswa gore rino nekuda kwedenda rekorona. Nekudaro, vateveri havafanirwe kuita pasina chimwe chezvakanakisa zvechiGerman edition yekomiki gungano: iyo Cosplay Championship. Panzvimbo pekuita pasaiti, maconnoisseurs anogona kuvhotera vavanoda uye vanotsigira cosplay yavo yavanofarira.
Izvozvo zvakandishamisa Kubviswa kweCCXP Cologne 2020 kwete. Chiito chevarongi, avo vangadai vasina kuita neimwe nzira pachirevo chehurumende yehurumende yeNRW, chaive chakakosha uye chaive chakakosha. Zviitiko zvikuru zvinorambidzwa kusvika Gumiguru 31st. Pachine kadiki kekomisheni kongiresi yekunzwa kune vateveri, yakaderedzwa kuita chimwe chiitiko. Sezvo vagadziri veCCXP Cologne vazivisa, Cosplay Championship ichaitika ingangoita - uye gumi mafainari akatotemerwa.
Top-kirasi cosplay Championship
Makwikwi ecosplay ari pamusoro-kirasi gore rino. Uye kune zvakare chinhu chitsva: Pakati pezvimwe zvinhu, isu tiri kutsvaga yakanakisa cosplay muzvikamu zvina. Mibairo kubva kumichina yekusona yePfaff uye Cosplayflex yakamirira vanokunda.
Chiitiko ichi zvakare chepasirese: vanopfuura zana vepasirese cosplayers kubva kunyika gumi neshanu pamakondinendi mana vakapindura kudanwa - mazino avo zvino ari mukupedzisira. Pamusoro pechisarudzo chejuri, gore rino kune zvakare, kekutanga, mukana wenharaunda yekupa mubairo wavo wavanofarira cosplay.
Mukupedzisira, pfungwa dzavo dzinokwikwidzana: Caio CDK, Erza Cosplay, In.Sain.I, Krystl Cosplay, Kurichan, Magic Wardrobe NL, Samui San, Sumi Cosplay, Vega Cosplay uye Wasteland Weber. Iwo ese ari pamusoro penhumbi dzinotonhorera, "Best Armor" ndiro zita repamutemo rechikamu chemakwikwi.
Thematically zvese zvinopihwa nemitambo uye yevaraidzo chikamu chinosanganisirwa: Medieval, Fantasy, Sci-Fi kana Cyberpunkt - hazvina basa: chinhu chikuru chine mavara akajeka, ane rudo akadzama uye anoshamisira. Chete chaivo "vavaki vezvombo", kureva cosplayers vanovimba ne 3D kudhinda kana zvinhu zvakaita seEVA kana Worbla pamapfekero avo, vanopihwa muchikamu ichi.
Chiito panhandare yepamhepo pasaiti chichavepo zvakare paCCXP Cologne 2021. Mufananidzo: André Volkmann
Kune zvakare mamwe mapoka emakwikwi ejury: Semuenzaniso "Best Costume" kune wese anofarira kusona nekupfeka majasi pane ari thermoplastic. "Best in Show", kune rumwe rutivi, ndeyekunyanya kunakidza kuita kwese. Vatsigiri vanogona kuvhotera mubairo wenharaunda, unounzwa kekutanga. Imwe nyanzvi yevatongi inoumbwa naBen aka Maul Cosplay, Elien aka Liechee naMirjam aka Tingilya Cosplay vachakurukura mhedzisiro yekupedzisira. Vese connoisseurs uye nyanzvi dzechiitiko.
Makwikwi ecosplay anovhara nguva yekumirira yeinotevera fair zvishoma zvishoma. Iyo CCXP Cologne 2021 ichaitika kubva munaChikumi 25 kusvika 27 - ipapo zvakare pane saiti mumahoro eKoelnmesse uye necosplay padanho hombe re "Thunder Theatre". Isu tinewo mifananidzo uye Zvinoonekwa kubva kuCCXP Cologne 2019.
Rumwe ruzivo, kusanganisira kuvhotera Community Award, rinowanikwa pa www.ccxp-cologne.de kana pasocial media.
[stextbox id = 'autor' caption = 'Tiri kutsvaga zvinosimbisa zvechikwata chekunyora']Tiri kutsvaga vanyori venhau mundima dzemitambo, mabhuku, mitambo yebhodhi, pamwe nemafirimu nenhevedzano. Unoda here kutora chikamu? zvino > pano < baya uye shandisa.[/ stextbox]
Kare Call of Duty: chikamu chitsva chakaonekwa muchitoro cheMicrosoft?
Inotevera Pandemic Legacy: Mwaka 0 inotora vatambi muCold War
Everdell: Shanduro yeGerman inowanikwa zvakare kubva muchirimo - kusanganisira kuwedzera
Crowdfunding: Yazvino mitambo yebhodhi paKickstarter (9th svondo 2021)
Pegasus Games Nhau: Rwendo MuJapan